सुखलाई लत्याउ,दुःखलाई अङ्गाल - Sadrishya
सुखलाई लत्याउ,दुःखलाई अङ्गाल
कादर खान- रङ्गमञ्चले मलाई निकै ठूलो सहयोग गरेको छ । मैले ८–९ वर्षको उमेरमा नै थिएटरमा काम गर्न थालि सकेको थिएँ । महबुब खानका सिनेमा ‘रोटी’मा एउटा बुढा अभिनेता हुनुहुन्थ्यो । उनको नाम हो– असरफ खान । उनले एउटा नाटक तयारी गरिरहेका थिए– वमाज अजरा । यो रोमियो जुलियट टाइपको नाटक थियो । उनलाई एउटा सानो राजकुमारको खाँचो थियो । त्यो नै मेन क्यारेक्टर थियो । भनेपछि ८–९ वर्षको त्यस्तो केटालाई कहाँ खोज्ने ? जसले झण्डै ४० पाना लेख्न पनि सकोस र त्यो प्रत्यक्ष दर्शकहरूलाई सुनाउन सकोस् ।
भनेपछि तपाईं निकै बठ्याइँ गर्नुहुन्थ्यो?
हाम्रो परिवार मूलतः काबुलको हो । म त्यहीँको एउटा कट्टर मुस्लिम परिवारमा जन्मेको हुँ । हजुरबुवा सारै गरिब थिए । हातमुख जोड्न निकै धौ–धौ थियो । मभन्दा अघि मेरा तीन भाइ थिए जो आठ वर्ष पुग्दा नपुग्दै बिते । जब म पैदा भएँ आमाले– होइन यो ठाउँ मेरो छोराका लागि होइन भन्नुभयो । खासमा काबुलको हावा आफ्ना केटाकेटीलाई नफापेको आमाको ठम्याइ थियो । उनी त्यहाँबाट हिँड्न चाहन्थिन् तर कहाँ ? केही पत्तो थिएन ।
पढ्नुपर्छ भन्ने यस्तो जबरजस्त चेतना उहाँमा कसरी आयो?
मलाई थाहा छैन । मेरा लागि उहाँ भगवान हो । मेरीजस्ती आमा सबै छोराहरूले पाऊन् भन्ने कामना गर्छु । उहाँले मलाई जीवनमा सबै कुरा दिनुभयो । मेरो भनाइको आशय भौतिक कुराहरूसँग होइन, आजसम्म– म जे बन्न सकेँ, त्यो मेरी आमा र बुबाका कारण सम्भव भएको हो । मेरा बुबा निकै कमजोर मान्छे हुनुहुन्थ्यो । निकै गरिब हुनुहुन्थ्यो तर निकै पढेको । उहाँलाई दश प्रकारको फारसी र आठ प्रकारको अरबी भाषाको ज्ञान थियो ।
उहाँले यो सबै कुरा कसरी सिक्नु भयो त?
काबुलमा उहाँले खोई कुन चाहिँ हो एउटा विद्यालयमा काम गर्नु हुन्थ्यो । उहाँको हस्तलिपि निकै राम्रो थियो । तर पढेलेखेका मान्छेहरू पैसा कमाउन सक्दैनन् । जब उहाँ बम्बई आउनुभयो, त्यसपछि यहाँको एउटा मस्जिदमा मौलबी बन्नुभयो । त्यहाँ उहाँले अरूलाई अरबी भाषा सिकाउनु हुन्थ्यो । तर त्यसको साटो उहाँलाई त्यहाँ केही पनि हासिल हुँदैन्थ्यो । सिवाय पाँच–छ सय मात्र महिनाको ।
त्यति बेला तपाईं कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो?
त्यति बेला म झण्डै २४ वर्षको थिएँ । त्यति हुँदा पनि म आमालाई भेट्न दिउँसो गइरहन्थे । आमा मलाई घर आउन भन्नुहुन्थ्यो तर मैले त्यो कुरा मान्न सकिनँ । मैले भनेँ– तपाईंलाई माया गर्छु, त्यसैले भेट्न आउँछु तर मेरो आत्मसम्मानले मलाई यहाँ बस्न दिन्न । म त्यो मान्छेबाट बेइज्जत हुन चाहन्न । जब उसले मेरो बेइज्जती गर्छ तब कुन्नि किन मलाई लाग्छ, त्यसले तपाईंको बेइज्जती गर्दैछ ।
तपाईंको सिनेमाको काम?
भनेपछि तपाईंले के सोच्नु हुन्छ भने नयाँ पिढीसँग त्यति धेरै भोगेकै छैन कि उसले राम्रो लेख्न सकोस्?
हेर्नुस्, यातनाको सघनता– यो पिढीका मान्छेहरू यातनालाई अर्कै केही नामले सम्बोधन गर्छन् । यदि एउटा केटोलाई एउटी केटीसँग प्रेम भइहाल्यो र उसले घण्टौँसम्म उसलाई कुरिरह्यो भने त्यो यातनालाई यिनीहरू ‘सफरिङ’ भन्छन् । होइन हजुर, यो ‘सफरिङ’ होइन । त्यो अरू केही नै हो र त्यो यस्तो कुरा हो जुन तपाईंको अचेतनमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई त्यही नै लेखिनुपर्छ । त्यही रेकर्ड गरिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बल्ल तपाईंले जीवनको कुनै पनि समयमा आफैलाई रुवाउने मुडमा पाउन सक्नु हुन्छ ।
भनेपछि त्यो कुन समय हो जब तपाईंले अध्यापन,लेखन र अभिनयबाट एकैचोटि सिनेमामा हाम फाल्नुभयो?
उर्दूमै । म फर्किएर गएँ । मलाई देख्ने बित्तिकै उनी बौलाए जस्ता भए । ‘यो स्वाँठलाई सिन के हो थाहै भएन’– उनले भने । म उनको ओठ पढ्न सक्थेँ । उनी मेरा बारे नराम्रो–नराम्रो बोलिरहेका थिए । त्यसैबीच मैले भने– ‘यो स्वाँठले सब्जेक्ट के हो भन्ने बुझिसकेको छ र केही लेखेर ल्याएको छ ।’
सिनेमा लेखनका बारेमा केही कुरा भन्नु न?
मैले दर्शकबारे तपाईंको मष्तिष्कमा कस्तो छवि छ भनेर सोध्नै लागेकी थिएँ । ए,भनेपछि तपाईंको मष्तिष्कमा मनमोहन देसाईको छवि रहन्थ्यो?
जस्तै, मैले जुन बेला चौपाटीमा भारतीय विद्या भवन नाममा आयोजना गरिने निकै तल्लो स्तरको नाटक प्रतियोगिता हुन्थे– ‘या खुदा’ त्यहाँ कस्ता अडियन्स हुन्थे । आम्मामा… निकै डर लाग्दा । जहिलै स्टेजमा गयो कि उनीहरू– ‘ल आउँ आउँ’ भन्थे । एक्टर डराउनै लागेको हुन्थ्यो कि उनीहरू भन्थे– ‘ल ल बस’ । एक्टरले कुनै सिनमा कसैलाई फोन गर्न फोन उठाउँदा दर्शकहरू– ‘हेलो’ भन्थे । अनि एक्टर नम्बर डायल नगरीकनै बोल्न थाल्थ्यो । अनि उसलाई जुत्ताले हानेर बाहिर निकालिदिन्थे ।
लेखन र अभिनयका बारेमा
दर्शकहरूलाई बाँधेर राख्ने कुनै‘ट्रिक’ छ र?
तपाईंले सबैलाई चिन्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले आफूलाई हरफनमौलाको रूपमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईं राम्रो डकर्मी हो भने राम्रो काठ छान्न त जान्नु पर्यो नि । त्यसलाई राम्रोसँग काट्न जान्नु पर्यो । त्यहाँ भएको जम्मै खाली ठाउँमा तपाईं खेल्न सक्नुपर्यो । डिजाइन पनि सक्दो राम्रो गर्नुस् । ‘डिजाइन’ र ‘एकोमोडेसन’ नै स्क्रिप्ट लेखनको उपकरण हो ।
मैले लेखेको लाइन सही छ भनेर तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ?
प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलै केही कुरा भन्नुस् यस्तो–यस्तो प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ कि त्यसबारे तपाईंले सोच्नु नै भएको हुन्न । कैयौँ पटक तपाईंलाई लागिरहन्छ कि ‘ओ हो !’ यो लाइनले निकै हिट गराउँछ तर त्यसले केही गर्न सक्दैन । मलाई लाग्छ तीन किसिमका प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्– पहिलो, तपाईंको प्रतिक्रिया । दोस्रो, निर्देशकको प्रतिक्रिया र तेस्रो, दर्शकको प्रतिक्रिया । तीनै प्रतिक्रियाका आआफ्ना क्षेत्र हुन्छन् । तर तपाईं लेखक भएपछि तीनै कुराको प्रतिक्रियाबारे आफैले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो काल्पनिक संसार जस्तो हुने गर्छ ।
सुख र दुःखको बारेमा नि?
दुःख भनेको निकै राम्रो कुरा हो ।
सुख,दुःख र यातनाबारे जान्न जब मैले कादर खानलाई तपाईंको मनपर्ने डायलग कुन हो भनेर सोधेँ उहाँले‘मुकद्दर का सिकन्दर’ भन्ने सिनेमाको एउटा सिन रोज्नु भयो र आफ्नो बशीभूत गर्ने आवाजको उतार–चढावमय शैलीमा एउटा अध्यापकले जसरी मलाई डायलाग सुनाउनु भयो?
यो सिनेमामा मेरो अभिनय एउटा भिकारीको थियो । म चिहानमा जान्छु, त्यहाँ एउटा सानो केटालाई देख्छु । केटो चिहानमाथि बसेर रोइरहेको हुन्छ ।
‘उठ र आऊ मसँग । हेर चारैतिर । यहाँ पनि कोही कसैको बहिनी हो, कोही कसैको भाइ हो । कोही कसैकी आमा हो । यो मौनतामा डुबेको सहरमा, यसै माटोको थुम्को तल सबै थिचिएर बसेका छन् । मृत्युको बाटोबाट को विमुख हुन सकेको छ ? यो मृत्युबाट को पन्छिन सक्छ र ? आज उनको त भोलि हाम्रो पालो हो । मेरो यत्ति कुरा सम्झनु, यो फकिरले भनेको यत्ति कुरा नभुल्नु । यो कुरा जीवनभरि निकै काम लाग्नेछ । यदि खुशीमा मुसुक्क हास्छौँ भने दुःखमा खित्का छोडेर हाँस्नु किनभने जिउँदा हुन् ती मानिसहरू जो मृत्युलाई चुनौती दिन्छन्, तर मुर्दाभन्दा पनि घिनलाग्दा हुन ती मानिसहरू जो मृत्युदेखि डराउँछन् । सुख त साथ नदिने निर्दयी हो, केही दिनका लागि मात्र हो । उमेर जसरी आउँछ र जान्छ । संसारलाई सान्त्वना दिन्छ, मनलाई सान्त्वना दिन्छ तर दुःख त सधैँको साथी हो । एकचोटि आयो भने कहिलै पनि फर्किएर जाँदैन । त्यसैले सुखलाई लत्याउ, दुःखलाई अँगाल । भाग्य तेरो चरणमा हुन्छ र तँ मुकद्दरको बादशाह हुन्छस् ।
(कोनी हामले कदार खान संग लिएको यो अन्तर्वार्तालाई नरेश ज्ञवालीले अनुबाद गरेका हुन् )